နှုတ်ဆတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မိတ်ဆက်ခြင်း... | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဘလော့လေးကို ပြစ်ထားတာ အတော်ကြာသွားပါပြီ....! အခုတင်တဲ့ ပိုစ့်လေးကတော့ နှုတ်ဆတ်ခြင်း(သို့မဟုတ်) မိတ်ဆက်ခြင်းလေးပါ...! ကျွန်တော် ဘလော့လေးကို နောက်ဘယ်သောအခါမှ ရောက်လာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး...! များစွာသော အကြောင်းများကြောင့် ကျွန်တော် အရမ်းတန်းဖိုးထားတဲ့ ဘလော့လေးကို စွန့်ခွာရတော့မှာပါ...! ဘလော့သူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်တော်အိမ်လေးကို ရောက်လာကျသော သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကိုနှုတ်ဆတ်ပါတယ်...! ကျွန်တော် နိုဝင်ဘာလမှာ မြန်မာပြည်ကိုပြန်တော့မယ်....!
7 Response to နှုတ်ဆတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မိတ်ဆက်ခြင်း...
အားတဲ့အခါလဲ စာတွေတင်ပေါ့ ရပါတယ်
ချစ်သူလေးက ချစ်စရာကောင်းသလို သယ်ရင်းအောင်အောင်လည်း ကြည့်ကောင်းပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ရင်လည်း အင်တာနက်သုံးလို့ အဆင်ပြေရင် ဘလော့လေးကို ပစ်မထားနဲ့ပေါ့နော်
ပြန်တာလဲပြန်ပေါ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ကောင်းမလေးလဲ လှပါရဲ့
ဒါပေမယ့် ဘလော့ကိုတော့ မစွန့်လွတ်ပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
အိမ်မှာအင်တာနက်တပ်ထားလိုက်ပါ။ တစ်လ ၂၀၀၀၀ ဘဲဆို။ ဘလော့တော့ မစွန့်ပါနဲ့။
အကိုလည်းဘလော့မလည်နိုင်တာကြာပေါ့... ကိုယ့်ညီရဲ့ ပို့်စ်လေးဖတ်